तपाई राजनीतीकर्ता कि समाजसेवी :अनिल रिजाल – अब दैनिक
तपाई राजनीतीकर्ता कि समाजसेवी :अनिल रिजाल
नेपाली काँग्रेस जिल्ला तरुणदल मोरंघका जिल्ला कोषध्यक्ष तथा समाज सेवी अनिल रिजाल पछिल्लो समयमा समाजसेवामा क्रियासिल भएका छन् । बिश्वमा (कोभिड १९) कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यस संगै सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा समाजमा निम्तीएको बिपद ब्यवासथापन गर्न आफुले सकेको सहयोग गर्दै अघि बढिरहेका छन् । बिभिन्न बिपदको समयमा अग्रणि भुमिका मा देखिने समाज सेवी रिजाल आफ्नो राजनिति छवि बनाउन भन्दा पनी समाजमा भएको बिपद लाई न्यूनिकरण गर्न अग्रसर हुने गरेको बताउँछन् । हामिले उहाँ संग गरेको छोटो अन्तर्वार्ता ।
प्रश्न : यस्तो बिपदमा खाना बाँड्दै हुनुहुँदो रैछ नि ?
कोशी अँञ्चल अस्पतालमा अति बिपन्न मानिस हरु उपचार गर्न आउनु हुँन्छ उहाँ हरुलाई खाना र खाजा खाने ठाउँपनी छैन त्यसैले खाना बाँडेको हो । सवै मानिसहरुलाई घर गएर खाना ल्याउने सम्भावना पनी छैन भएको होटल र अस्पतालको क्यान्टिन समेत बन्द भएको आवस्था छ । अहिलेको यो घडिमा बिरामि र बिरामिका कुरुवा हरुलाइृ खाना भन्दा ठुलो केहि हुँदैन । त्यसैले यो बिपत भरी खाना बाँड्ने योजना बनाएर खाना बाँडेको हो ।
प्रश्न : आफ्नो राजनीती छवी बनाउन यस्तो कार्य गर्नु भएको त हैन ?
हैन । राजनीती म गर्छु आफ्नो ठाउँमा छ । तर देश नै अफ्टेरो परेको बेला राजनीती गर्ने भन्दा पनी यतिबेला समस्यामा परेका हरुलाई सेवागर्नु ठुलो कुरा हो । सरकारले सवैलाई राहत दिन सकेका छैन्न र सवै ठाउँमा राहत समेत पुर्याउन सकेको छैन त्यहि भएर सेवाको भावनाले यो सव गरेको हो । यसमा राजनीती छवी बनाउने भन्ने कुरै हुँदैन । यो मेरो निस्वर्थ सेवा हो ।
प्रश्न :तपाई राजनीतीकर्ता कि समाजसेवी
अब जस्ले जसरी बुझ्नु भएको छ म त्यहि हुँ । किन कि समाज सेवा गर्नु मेरो धर्महो धर्म गर्दा राजनीति जोडिन्न् । राजनितीमा पनी आवद्ध छु । पार्टिले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्नका लागी राजनैतिक दल संग आवद्ध भएको हुँ यि दुवै कुरा भिन्दा भिन्दै हुन । समाजमा कसैले पाएको दुखमा मैले सानो सहयोग गर्दा उहाँ हरुलाई सहज हुन्छ भने मैले सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ । आगामि दिनमा पनी सामाजीक भलो हुने कार्यमा संधै सहयोग गर्न तत्पर छु ।
प्रश्न : दैनिक कति खाना खुवाउँदै हुनुहुँन्छ ?
हामिले दैनिक अस्पताल र मन्दिर हरुमा डाटा लिएर खाना खुवाउँदै छौ । दैनिक ३ समय देखि माथि खाना खुवाउँदै छौ । र यो कार्य लकडाउन भरी हुने छ ।
प्रश्न : कसरी सम्भाव छ लक डाउन भरी खाना बितरण गर्न ?
खासमा मेरो योजना थियो । लकडाउन भएको समयमा अस्पतालका बिरामि र बिरामी कुरुवा हरुलाई खाना खुवाउने । मैले मेरा आदरणीय दिदी नेपाल तरुण दल को केन्द्रीय पार्सद माननिय बिन्ध्या कार्कि , नेपाल तरुण दलका मोरङ अध्यक्ष प्रभाक थापा, उहाँ हरु संग योजना बनाएर सुरु गरेका हौ ।हामिले आगामि दिनमा राहत बितरण गर्नका लागी अझै योजना बनाउँदै छौ । पार्टिगत हिसावले पनी सहयोग जुटाउने योजनामा हामि छौ र सवैले सहयोग पनी गर्नु भएको छ । सवैले आ– आफ्नो ठाउँ बाट सहयोग गर्नु भएको छ । ब्याक्तिगत रुपमा नै यो कार्य अघि बढाएका हौ आगामि दिनमा पनी यसरीनै अघि बढाउने योजना छ ।
प्रश्न : अन्त्यमा के भन्न चाहानु हुँन्छ ?
अन्त्यमा म के भन्न चाहान्छु भने , यो बिपतको घडि यि र यस्ता समस्यामा परेका मानिस हरुका लागीमात्र नभई सवैको लागी आएको बिपद हो । यस्तो अवस्थामा हामी सके सम्मा सुरक्षीत रहन आवश्यक हुन्छ । सवैले घरैमा बसेर कोरोना भाइरस बिरुद्धको लकडाउन लाई समर्थन गरौं र अति बिपन्न वर्ग हरुलाई समस्या परेको हुन्छ सक्ने सम्म आफुले सहयोग गरौ । नसकेको खण्डमा घरमै बसेर लकडाउनलाई सफल बनाउँ यहि भन्न चाहान्छु ।